တရုတ်နိုင်ငံ၏ အိုမီခရွန်ကာကွယ်ဆေး သုံးလေးလအတွင်း လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများ ပြီးစီးရန် မျှော်မှန်း - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့်နေရာတစ်ခု၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးရန် ပြင်ဆင်နေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇကွဲအား တိုက်ဖျက်ရေးကာကွယ်ဆေးအတွက် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကို သုံးလေးလအတွင်း အဆုံးသတ်ရန် မျှော်မှန်းထားပြီး အသုံးပြုရန် တဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူက ဧပြီ ၂၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကြိုတင်လက်တွေ့သုတေသနပြုရာတွင် ကာကွယ်ဆေးသည် အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇကွဲအား တိုက်ဖျက်ရာ၌ ကောင်းမွန်သော လျော့ပါးစေသည့်လှုပ်ရှားမှု ရှိခဲ့ကြောင်း Sinopharm နှင့် မိတ်ဖက်ဖြစ်သော ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သူ တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသားဇီဝနည်းပညာအုပ်စု (CNBG)၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှင့် သိပ္ပံပညာရှင်ခေါင်းဆောင် Zhang Yuntao က အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်လည်း ကာကွယ်ဆေးသည် အိုမီခရွန်ကူးစက်မှုများအား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရာတွင် ကာကွယ်မှုတစ်ချို့ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ပြသခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေး၏ အကာအကွယ်ထိရောက်မှုအား နောက်ထပ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ယင်းကာကွယ်ဆေးအား ဧပြီ ၂၆ ရက်တွင် အမျိုးသားဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့က လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအတွက် အတည်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအတွင်း ကျပန်းရွေးချယ်မှု ၊ double-blind နှင့် cohort လေ့လာသည့်နည်းလမ်းများအား inactivated ကာကွယ်ဆေး၏ ဘေးကင်းမှု နှင့် ခုခံအားတုံ့ပြန်မှုအား လှုံ့ဆော်ရန် စွမ်းရည်တို့အား အကဲဖြတ်ရန် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် သုံးကြိမ် ထိုးနှံထားပြီးသူ အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူများကို ရွေးချယ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇကွဲတိုက်ဖျက်သည့် ကာကွယ်ဆေးကို အောင်မြင်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ CNBG သည် ကာကွယ်ဆေးအသစ်အား ထုတ်လုပ်ရန် ၎င်းတို့၏ အဓိက ထုတ်လုပ်ရေးစွမ်းရည် နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသားဇီဝနည်းပညာအုပ်စု (CNBG)၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နှင့် သိပ္ပံပညာရှင်ခေါင်းဆောင် Zhang Yuntao က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, April 27 (Xinhua) — Clinical trials for China’s vaccine against Omicron variants are expected to conclude in three to four months and will be gradually put into use, according to the vaccine developer on Wednesday.
Pre-clinical research showed the vaccine has good neutralizing activity against Omicron variants. said Zhang Yuntao, chief scientist and vice president of vaccine developer China National Biotec Group (CNBG), affiliated with Sinopharm, during an online press conference.
Animal experiments have also shown that the vaccine offers some protection against Omicron infections, he said, noting that the protective effect of the vaccine needs to be observed further in clinical trials.
The vaccine was approved for clinical trials by the National Medical Products Administration on Tuesday.
During the clinical trials,arandomized, double-blind and cohort study method will be adopted among people aged 18 and above who have already received two or three doses of COVID-19 vaccines to evaluate the safety and immunogenicity of the inactivated vaccine.
With the successful development of the vaccine against Omicron variants, CNBG will coordinate its main production capacity and equipment to manufacture the new vaccine, said Yang Huichuan, chief scientist and vice president of CNBG. Enditem
Photo – A medical worker preparesadose of COVID-19 vaccine atavaccination site in Beijing, capital of China, Dec. 9, 2021. (Xinhua/Zhang Yuwei)
ရုရှား-ယူကရိန်းပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ : ယူကရိန်းသို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရောက်ရှိ